वाणिज्य बैंकहरूको संकलन रकम ३० खर्ब ६२ अर्ब पुग्यो - आर्थिक पाटी
आधा रकम मुद्दती खातामा
२०७६-११-११ बिचार / प्रतिक्रिया
काठमाडौं । २७ वाणिज्य बैंकहरूमा पुस मसान्तसम्म विभिन्न संस्था तथा सर्वसाधारणको बचत संकलन ३० खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ ।
यो रकममध्ये झण्डै आधा रकम मुद्दती (फिक्स्ड) खातामा संकलित छ। १४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा छ भने बचत (सेभिङ) खातामा ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ। करेन्ट खातामा २ खर्ब ८१ अर्ब र कल खातामा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ छ। अन्य खातामा ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलित छ ।
२७ बैंकहरुको कुल निक्षेप विवरण अनुसार मुद्दती खाताको हिस्सा ४९. ०१ प्रतिशत छ। त्यस्तै बचत खातामा संकलन भएको रकमको हिस्सा २९. ४५ प्रतिशत छ। कल खातामा ११. ७६ तथा अन्य खातामा १. १७ प्रतिशत रकम संकलित छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको पुस मसान्तसम्मको विवरणअनुसार मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै रकम ग्लोबल आइएमई बैंकले संकलन गरेको छ। सो बैंकमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ यस्तो निक्षेप छ।
प्रतिशतका आधारमा भने सिटिजन्स बैंकले संकलन गरेको निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत हिस्सा मुद्दतीको छ। त्यस्तै बचत खातामा रकमका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ९४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। बैंकको कुल निक्षेपमा बचतको अंश ४७ प्रतिशत हो।
हेर्नुहोस्, कुन बैंकको कुन खातामा कति छ निक्षेप ? (रकम दश लाखमा)
Century Bank Ltd
Source: Nepal Bankers' association